Tizen na Huawei Watch ọzọ? | Akụkọ akụrụngwa
Tizen na Huawei Watch ọzọ?
Eziokwu bụ na afọ a anyị enweghị akụkọ banyere smartwatches kachasị mkpa ma ọ bụ nke a ma ama nke na-eweta sistemụ arụmọrụ gam akporo gam akporo. O doro anya na ahịa ndị a na-eyiri uwe nwere ike ịbụ ntakịrị ntakịrị taa n'ihe gbasara akụkọ na ọ bụ na ha nwere ihe niile ka ha na-ekwu. Mana taata enwere asịrị dịtụ iche Huawei wearable na Samsung si Tizen sistemụ arụmọrụA pụrụ ịhụ ha abụọ ọnụ n'ọgbọ ọhụụ nke ngwaọrụ eji arụ ọrụ. Ọ bụ ihe dị ịtụnanya ma ọ bụrụ na anyị na-eche echiche oyi mana anyị enweghị ike ịchịkwa ikike a na-eche na Tizen na-arụ ọrụ nke ọma na Samsung Gears.
O yiri ka gam akporo Wear adịghị n'oge ya kachasị mma na nke a abụghị ihe ọhụrụ, mana na ụlọ ọrụ nke caliber nke Huawei bu n'uche ịbanye na ntinye nke Tizen na elele ọhụụ ya yiri anyị ihe akpọtụrụ aha. N'aka nke ọzọ, ebe ọ bụ asịrị na ọ nweghị ihe gọọmentị anyị nwere ike iche na ha ga-enwe ihe atụ Tizen na onye ọzọ nwere sọftụwia Google, ma nke a bụ ihe ọzọ ebe ọ bụ na usoro dị iche iche na nsụgharị abụọ na-anọchite anya ọrụ karịa ka ọ dị na mbụ banyere mmelite onwe ha na ndị ọzọ.
N'agbanyeghi na ọ nwere ike, anyị ga-eme ka ọ pụta ìhè na nke a bụ asịrị na anyị ekwesịghị ịrapara na leaked ebe ọ bụ na ọ nweghị ndị abụọ metụtara ma ọ bụ gọnarị ozi ọma, o doro anya na ọ bụrụ na enweghị onye isi, anyị enweghị ike ikwu na a ga-emezu ọ ga-abụrịrị ihe dị oke anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Tizen na Huawei Watch ọzọ?
Ndoo ma ha di ka akwa mkpuchi akwa, Ha di nkpuru obughi ibu ha jiri aka Barbi gosi ya na ha adighi nma
Ọtụtụ narị ndị ọrụ na-ebibi iPhone 7 ha maka vidiyo adịgboroja
Moscow ga-akwụsị iji sọftụwia Microsoft